Howlgalka Midowga Afrika oo Mudo-kordhin loo sameeyay | KEYDMEDIA ONLINE
NEW YORK - Gollaha Amaanka ee QM ayaa meel-mariyay qaraar cusub ee UK usoo gudbisay kaasoo mudo-kordhin hal sano ah loogu sameynayo Ciidamada AMISOM.
Qaraarka oo ka kooban 13 bog ayaa waxaa ansixiyay 15-ka dowladood ee Gollaha uu ka kooban yahay, oo isku raacay inay Ciidanka AMISOM sii joogaan Soomaaliya illaa December 2021.
Waxaa jira khilaaf u dhaxeeya Midowga Afrika iyo dalalka bixiya dhaqaalaha AMISOM, kadib markii la dhimay miisaaniyadda howgalka Soomaaliya sababo la xiriira in reer galbeedka ay soo foodsaartay caqabado gudaha ah oo COVID-19 kamid yahay.
AMISOM waxay ka kooban tahay Kenya, Uganda, Jabuuti, Itoobiya iyo Burundi oo ku deeqay askar lagu qiyaasay 22,000 oo askari kuwaasoo ka howlgala Hiiraan, Muqdisho, Shabeellooyinka iyo Jubada Hoose.
Askari kasta waxaa u qoran mushaarka $1,228, oo ku dhacdo akoonka Wasaaradda difaaca dalka uu ka socdo oo canshuur iyo qarash kale oo fududeyn ah ka jarata, iyadoo warbixin dhawaan soo baxday lagu sheegay inuu jiro musuq-maasuq ku aadan in taliska AMISOM uu qaato lacagta askar dhimatay iyo kuwa shaqada ka tagay [Halkan ka akhri].
AMISOM askarigii ugu horeeyay oo ka socda Uganda ayaa yimid Muqdisho 19-kii January 2007, waxayna Ciidanka Midowga Afrika ka caawiyeen dowladda inay la wareegyo magaalooyin badan oo Muqdisho kamid tahay.